IZAY MANONONA NY ANARAN’NY TOMPO,… – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 6, 2015 décembre 3, 2015 Laisser un commentaire sur IZAY MANONONA NY ANARAN’NY TOMPO,…
« Moa entina va ny jiro mba ho saronan’ny vata famarana, na hatao ao ambany farafara? Tsy hatao eo amin’ny fanaovan-jiro va izy? » Marka 4:21
***Eo amin’ny fiainana andavan’andro dia tsy mahita ny olombelona rehefa ao amin’ny maizina, ary eo no ilàny ny jiro. Ny jiro dia natao mba hanazava ny maso, tsy mahita rehefa maizina. Ny teny eto dia ny hoe tsy saronana vata famarana ny jiro. Ny fanaovana ny jiro ao ambany vata famarana dia toa fanaovana tsinontsinona azy. Efa misy toerana natokana ho an’ny jiro tokoa dia ny fanaovan-jiro ary amin’ny toerana ahazoany mampisandratra ny fahazavany!
***Inona no soa azon’ny zanak’Andriamanitra amin’ny fametrahana ny jiro eo amin’ny toerana tokony hisy azy dia eo amin’ny fanaovan-jiro? Fantaro fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky Izy! Andriamanitra mitandrina fanekena sy famindram-po amin’izay mitandrina ny
didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby!
***Ho an’ny zanak’Andriamanitra dia fanilon’ny tongony sy fanazavana ny làlany ny Tenin’Andriamanitra. Mila apetraka amin’ny toerana sahaza azy io Tenin’Andriamanitra io, ary aiza tokoa ny toerana misy izany Tenin’Andriamanitra izany eo amin’ny fiainana maha zanak’Andriamanitra, fa raha ataony ao ambany vata famarana tokoa izany dia izany no ambaran’ny Soratra Masina hoe fandrafiana an’Andriamanitra, ary mahatahotra tokoa ny famaizan’Andriamanitra! Ny Tenin’Andriamanitra dia milaza hoe: tsy hitaredretra Izy ny amin’izay mandrafy Azy fa hamaly azy amin’ny fandringanana.
***Antsika ary ny safidy! Haringan’Andriamanitra sa hiditra amin’ny Fifalian’ny Tompo ka hahazo famindram-po hatramin’ny taranaka arivo mandimby? Raha nanao tsinontsinona ny fanomezana avy amin’Andriamanitra izay ambara hoe fandrafiana Azy dia aoka kosa hifona ka hiverina Aminy ary Izy hanao antsika indray ho fanaka omem-boninahitra fa tsy fanaka alam-baraka intsony ka
hametraka antsika amin’ny toeran’ny fanaovan-jiro ary hiteraka fahazavana indray.
Publié parfilazantsaramada novembre 6, 2015 décembre 3, 2015 Publié dansUncategorized